Sawiro: Madaxweyne cag-jar oo tabab usoo xiray ciidamo cusub - Awdinle Online
Sawiro: Madaxweyne cag-jar oo tabab usoo xiray ciidamo cusub
Madaxweynaha dowladda deegaanka ismaamulka soomaalida itoobiya ayaa maanta soo xiray xaflad ay ku qalin jebiyeen ciidan tiro ahaan gaaraya 3,000 oo askari ciidan gaarka ah ee Dowlad Deegaanka Soomaalida DDS.
Madaxweyne Mustafa Cumar Cagjar ayaa yiri “Waxaa xeradda tababarada ciidamadda ee Garab-case noogu qabsoomay xaflad ay ku qalin-jabiyeen 3,000 oo askari, oo ciidamada gaarka ah ee liyuu police-ka, kuwaas oo 6dii bilood ee la soo dhaafey ku qaadanayay noocyada kala duwan ee tababarada ciidamada”.
Dufcaddan oo ah tii 10aad ee ciidamadda gaarka ah kuwaas oo kubiiraya ciidamadii hore u shaqaynayay waxaana uu madaxweyne cagjar si aad ah u bogaadiyey hanaanka tabab ee ciidanka, wixiina rajeeyey horumar iyo in ay ku biiri doonaan ciidamada gaarka ah ee deegaanka.
Sidaas darteed waxaa laga maarmaan ah ilaalinta xuquuqda shacabka dowlad deegaanka soomaalida itoobiya, ayadoo la sugayo amniga iyo xuduudaha deegaanka.
Previous articleDagaal ku dhex maray duleedka magaalada Jowhar ciidamada dowlada iyo Al-Shabaab
Next articleUN says: Yemen to become world’s poorest country if war continues.